Mandady rariny !
P.Prospère il y a 2 mois
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro ny matoan-dahatsorata norenesinao tao amin’ny Feon’i Lakroa tao amin’ny RDB ny talata 24 novambra teo. Samia ho tahin’Andriamanita isika rehetra.
Fanjakana tsara tataka !
Dia tsy hohaintsika ve ny hanova ny politika ?
Tsy mandry ny tany !